Huawei WiFi AX3, rawụta ị gharịrị ịkwalite njikọ gị | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 09/07/2021 13:00 | Automlọ akpaaka, Ngwa, Home, Nyocha
El WiFi 6 Ọ na-ewu ewu, ọtụtụ ngwaọrụ dị elu etinyego ya kemgbe afọ gara aga ma ọ na-arịwanye elu ọbụna n'ụlọ anyị. Agbanyeghị, ndị ọrụ ochie ahụ ndị ụlọ ọrụ "nyere anyị" anọghị na-enye ọmarịcha ahụmịhe na nke a.
Anyị na-enyocha Huawei WiFi AX3, ngbanwe zuru oke maka rawụta onye ọrụ gị na WiFi 6 na arụmọrụ dị egwu. Ka anyị hụ otu ị ga - esi were WiFi n'ụlọ gị gaa n'ọzọ ma melite ahụmịhe ị na-enwe na ịntanetị na ngwaahịa Huawei a dị ọnụ ala.
Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, anyị kpebiri ịme vidiyo nke ị nwere ike ileba anya na igbe nke Huawei WiFi 6 a can nwere ike ịzụta site na 59,99 euro na Amazon. Echefula nyocha na ọwa anyị YouTube n'ihi na anyị na-egosikwa gị otu esi edozi ya ngwa ngwa. Hapụ anyị ajụjụ ọ bụla na igbe igbe, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ma ị ga-ahapụ anyị ka anyị gaa n'ihu na-eto eto ma na-ewetara gị nyocha kachasị mma.
1 Design: Minimalism ìhè afọ n'ebe ọrụ
2 Nka na ụzụ: WiFi na netwọk "elu-ọgwụgwụ"
4 Nnwale anyị na ahụmịhe onye ọrụ
Design: Minimalism ìhè afọ n'ebe ọrụ
Anyị malitere na imewe ahụ, ka anyị chee ya ihu, nke a Huawei WiFi AX3 Ọ bụ ìhè afọ n'ebe ọrụ 'rawụta, o nwere nnọọ minimalist akụkụ. Anọ antennas anọ ahụ nwere ike ịdọrọ na anyị nwere ike idowe ha na rawụta ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
Ọ dị ezigbo mkpa na ọ na-amasị, ọ bụ ezie na o nwere ụfọdụ aghụghọ, ọ na-azụ na azụ. Wuru na ọcha matte plastic, ọ na-achụpụ mkpịsị aka na-adịghị egosi na ájá, a okomoko. Anyị nwere ọkụ na - egosi ihu n'ihu na bọtịnụ etiti maka njikọ ya na Huawei Link. Maka azụ Anyị na-ahapụ njikọ WAN nke ga-enye netwọk na rawụta, ọdụ ụgbọ mmiri, bọtịnụ On / Off na ọdụ ụgbọ mmiri LAN atọ. Na-echezọghị na akuku aka nri nke ihu router bụ mpaghara NFC iji jikọọ ngwaọrụ Huawei na «plis».
Nka na ụzụ: WiFi na netwọk "elu-ọgwụgwụ"
Anyị amataworị na ọ mara mma, mana ugbu a ihe na-abịa nke nwere ike bụrụ ihe dị mkpa karịa ihe gara aga, gịnị ka ọ na-ezo n'ime ya? Anyị na-amalite site n’icheta na Huawei WiFi AX3 a na-ere ya na abụọ dị iche iche, dual-core na quad-core. N'ihi ọdịiche ọnụahịa, ana m ekwu eziokwu n'ụdị quad-isi, nke bụ nke anyị na-enyocha ugbu a. Ọdụ ọdụ azụ atọ bụ Gigabit Ethernet ka ejiri jide bandwidth 1.000 Mbps.
Na ọkwa nche, anyị nwere nkwado okwuntughe WPA3 ya mere anyị nwere ike ekenye gị ọkwa a, ọ bụrụ na anyị chọrọ. Banyere WiFi, anyị nwere ọkọlọtọ WiFi 6 con 802.11ax / ac / n / a 2x2 na 802.11ax / n / b / g 2x2 na MU-MIMO, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị. Ihe nhazi nke na - eme ihe niile a bu GigaHome Quad-isi 1,4 GHz nke ga-ahụ maka ikesa akara ngosi ahụ n'ụzọ amamihe, yana ikwe ka anyị nwee ọ enjoyụ na atụmatụ nke ngwa AI AI nke Huawei nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Naanị ihe fọdụrụ ikwu, ọ bụ ezie na anyị ekwuola maka ya, bụ na anyị nwere NFC na ntọala ya.
Iji wụnye ya na anyị nwere usoro abụọ anyị ga-ahapụ gị n'okpuru:
Gbanyụọ netwọk WiFi nke onye na-ahụ maka ọrụ anyị ma jikọọ eriri Ethernet site na ọdụ ụgbọ mmiri 1 nke onye na-ahụ maka ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri WAN nke AX3. N'ụzọ dị otu a, anyị ga-edochi netwọị WiFi nke onye na-ahụ maka ọrụ ya na nke AX3 rawụta mana ibu nke netwọkụ ga-aga n'ihu na nke onye ọrụ ahụ.
Tinye rawụta onye ọrụ anyị na "ọnọdụ akwa" ma jikọọ na LAN 1 nke rawụta onye ọrụ na WAN nke AX3. N'ụzọ dị otú a, a "gafere" onye na - ahụ maka onye ọrụ ahụ ma ọ na - arụ ọrụ dị ka mmiri n'etiti eriri fiber optic na onye na - ahụ maka AX3 anyị, yabụ njikọ ga - adabere kpamkpam na AX3.
Anyị ahọrọla nhọrọ nke abụọ, ihe dị mgbagwoju anya mana nke ahụ na-eme ka nnwere onwe zuru oke site na ụlọ ọrụ ochie nke ụlọ ọrụ ahụ, na-achọpụta, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ịnwa, na anyị nwere ntakịrị oge na nkwukọrịta, dị mma maka igwu egwuregwu.
Ugbu a, anyị jikọtara na netwọk AX WiFi3 na anyị ga-agbaso usoro usoro ga-eduzi anyị itinye paswọọdụ, aha na ihe niile anyị chọrọ. Huawei na-eme ka ọ dị mfe nke na ọ baghị uru ịkọwa ya. Kedu ihe bara uru ọ na-ebudata ngwa AI nke AI (Android / iOS) Nke ahụ ga-enyere anyị aka:
Ejikwa ngwaọrụ ejikọrọ ma ekenye ha aha njirimara
Debe nbudata / bulite ngwaọrụ ọ bụla ejikọtara na aka
Mepụta usoro njikwa nne na nna dị elu
Mepụta netwọk WiFi ọbịa
Tọọ oge maka WiFi
Chọpụta netwọk anyị
Gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ akara ikanam
Jiri ọkachamara njikarịcha netwọk WiFi na-akpaghị aka
Melite ma jikwaa AX3
O doro anya na aplicación ọ bụ otu nzọụkwụ n'ihu, enyi zuru oke nke na-eme ka ahụmịhe ghọọ usoro zuru ezu.
Nnwale anyị na ahụmịhe onye ọrụ
Anyị na-anwale AX3 na ntanetị 600/600 Mbps sitere na O2 (Telefónica) na ọnọdụ akwa, dị ka e kwuru n'elu. Maka nke a, anyị ejirila ngwaọrụ dakọtara na ọkọlọtọ WiFi 6, dịka MacBook Pro na Huawei P40 Pro. N'otu oge, anyị nwere gburugburu 30 IoT ngwaọrụ ejikọrọ n'etiti ndị na-ekwu okwu, ndị na-ehicha ọkụ, ọkụ na-arụ ọrụ na akpaaka ụlọ n'ozuzu ya.
Netwọk 2,4 GHz: Na nke a, ọsọ ndị ahụ abụbeghị ọmarịcha mmelite, oke dị oke ma na-enye ihe dịka nsonaazụ nke onye ọrụ ahụ, agbanyeghị, n'adịghị ka nke gara aga, netwọkụ enweghị afọ ojuju ma ọ bụ gbochie arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ, AX3 a. nwere ike ijikwa ihe karịrị njikọ 150 n'otu oge, ọ na-egosi.
Netwọk 5 GHz: N'okwu a, anyị ahụla ezigbo mmụba ma na mkpuchi na ọsọ, na-eru ọsọ ọsọ nke 550/550 Mbps
Ihe na: 9 2021 XNUMX
Ke ofụri ofụri, ahụmahụ ka mma n'ụzọ dị ịrịba ama iji naanị Huawei AX3 rawụta ma hapụ onye ọrụ na ọnọdụ akwa, yabụ anyị na-akwado, ọkachasị ma ọ bụrụ na dịka m, ị nwere ọtụtụ IoT ma ọ bụ ngwaọrụ akpaaka n'ụlọ, ị na-atụle iwere ịga n'ihu na nke a. Ọnụ ya dị ihe dị ka euro 50 dabere na isi ire ere mgbe a na-enye onyinye, nke na-adịkarịkarị, yabụ enweghị m ike ịchọta otu ihe kpatara m ga-eji nọgide na-echekwa nke onye ọrụ ahụ.
Designdị dị egwu na ihe ndị ahọpụtara nke ọma
Mfe ntọala na ngwa AI
M na-atụ uche ihe karịrị akporo
Ọ naghị agụnye CAT 7 USB ma ọ dịkarịa ala, mana CAT 5e
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Automlọ akpaaka » Huawei WiFi AX3, rawụta ị ga-enwerịrị imezi njikọ gị